Blogging is dead! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Blogging is dead!
Posted by kai on Aug 26, 2011 in News, Opinions & Discussion | 11 comments
ဒီနေ့သတင်းလိုက်ဖတ်ရင်း.. အရင်ကနာမည်ကြီး ၀က်ဘ်ဆိုက်ကြီး ၇ခုရဲ့ကျဆုံးခန်းအကြောင်းဖတ်လိုက်ရတယ်..။ အဲဒီထဲက မြန်မာတွေ အသည်းစွဲ ဘလော့ဂ်(Blogger.com)ကြိး ကျဆုံးနေတဲ့အကြောင်း ဖတ်ရလို့ မျှဝေတာပါ..။
Blogger.com ကို Google ပိုင်တာမို့.. ကျဆုံးတယ်ဆိုပေမဲ့.. လူအ၀င်နည်းသွားတာဖြစ်ပြီး.. ဒေတာတွေတော့ ဆက်ရှိနေမယ်ထင်မိပါတယ်..။
မြန်မာတွေ.. အပါအ၀င်.. အင်တာနက်လူသားNetizen တွေက.. Facebook Twitter တွေဖက်ရွှေ့ကုန်ကြတာကိုး..။
7 Formerly Popular Sites that Are Dying
Indications are that Slashdot, Blogger, Digg and other sites are on their way out.
Thu Aug 25, 2011 11:17 AM ET
Content provided by John Brandon, FoxNews.com
Sunny days sometimes turn dark and dismal. A shirt that looked good on the rack at Target now sits in the bargain bin at Goodwill. And, that new car with the Hemi engine and the third-row backseat? It now drives likeacrusty tank.
The same is true of websites. What seemed so fresh when you first registered now seems likeaghost town. What happened? According to Gartner analyst Michael Gartenberg, site visitors routinely check the door to see if anyone else is leaving for better services. Like lemmings, they can pull up stakes and leave inaheartbeat. (Facebook, are you listening?) All you can hear are the crickets.
Blogging is dead – or at least it has shifted to another medium. Now, instead of typing several pages worth of material, most Web users just tap ina140-character sentiment on Twitter. “Long-form” blogging is not as popular, and we all know the jokes about the blogger in his parent’s basement. Sites like Blogger.com and TypePad.com have declined considerably of late, dropping about 25 to 30 percent in user visits per Compete.com. Granted, some have discovered the streamlined blogging tool WordPress.com, which has enjoyed steady growth the past few years.
၀က်ဖ်ဆိုက် တစ်ခု ကျဆုံးတယ်ဆိုတာက အဲ့ဒီဝက်ဖ်ဆိုက်ရဲ့ စွဲဆောင်နိုင်မှူ အားနည်းလာတာ အပါဝင် … အစိုးရက အချိန်ပြည့်ဘမ်းနေတာကြောင့် ၀င်ရခက်တာနဲ့လည်း ဆိုင်တယ်လေ …. ။ ကျော်ခွလည့်ပတ်ပြီး ဆိုက်ကိုကြည့်ရတာ …ကြာတော့ နည်းနည်း စိတ်ရှုပ်တာနဲ့ လွယ်လည်းလွယ် ပေါ်ပြူလာလည်း ဖြစ်တဲ့ ဖေ့စ်ဘွခ်တွေ ၊ တွခ်တာတွေပဲ ၀င်ကြည့်တာ များတော့တယ် … ။
သဂျီးရဲ့ ဆိုက်ကြီးလည်း အရင်ကတော့ … စွဲဆောင်အားကောင်းပါလျှက် အခုနောက်ပိုင်း စိတ်ဝင်စားမှူအားလျှော့လာတယ် …
ဟုတ်တယ်.. ဖွဲ့စည်းမှု ဖရိုဖရဲ နိုင်နေတာ..
လက်ရည်တက်တဲ့ မန်ဘာဝင်တွေ စာရေးနှုန်းကျသွားတာ..
အဟောင်းတွေ နောက်ဆုတ်ပြီး အသစ်တွေ ရှေ့တိုးလာတဲ့ ခေတ်ပြောင်းကာလ လို့တောင် ပြောရမလားပဲ.. ဟိဟိ
အားတင်းထားပါလို့။ ခုမြန်မာမှာ မနေ့ကစပြီး အရင်က ပိတ်ထားတဲ့ အချို့ဆိုက်တွေ တိုက်ရိုက် ဝင်လို့ရနေပြီ။
ဟုတ်ပါတယ် ဘယ်ချိန်ဝင်ကြည့်ကြည့် အရင်တုန်းက access denied လုပ်ခံထားရတဲ့ စာမျက်နှာတွေတော်တော်များများပွင့်လာပါတယ်။စောင့်ကြည့်ရမှာပါ
but,Bloggers will not dead.
I’m not Blogger,I’m R-palar.
a hak hak
ဘလောဂ်ဂါက မကျဆုံးပါဘူး။ မြန်မာကလည်း blogger.com က ထွက်တဲ့ ဘလောဂ့်စပေါ့ကို ဘန်းထားတဲ့အတွက် ဝေါ့ပလတ်ဘက်ကို လှည့်သွားကြတာပါ. ဘလောဂ့်ဂါကတော့ ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းတွေနဲ့ ဆက်လက်ရပ်တည်လို့တော့ ရနေပါသေးတယ်။ အရင်က ဂိုဂယ်မပိုင်ခင်ကတော့ ဒီတိုင်းဝင်လို့ရပေမယ့် ဂိုဂယ်ဝယ်ပြီးနောက်ပိုင်း ဂျီမေးလ်နဲ့တစ်ခါထဲချိတ်သွားပါတယ်။ ဒီတစ်ခုကျရင်တော့ တစ်ခုက ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေလုပ်ဖို့ ဖရီးဆိုက်တွေ ထွက်ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီတော့ တစ်ခုမရ တစ်ခုနဲ့ မနောကတော့ ရှေ့ဆက်သွားနေပါဦးမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါရစေ….
အဲဒါ..ကျုပ်က လုပ်ကြံပြောနေတာမဟုတ်ဖူးလေ..။ နောက်ပြီး မြန်မာပြည်က ဘလော့ဂ်တွေအကြောင်းလည်း မဟုတ်ဖူးလေ..။
တို့ ဆီမှာတော့ ဘာမှ မပွင့်.ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပဲနော့..
အဲတော့ ရေးလို့ရရင်ရေးမယ် မရရင်မရေးဘူး။
ဘာမှ မှ မလုပ်တတ်တာဗျာ။
ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ အင်တာနက် သုံးသူတွေ ဘလော့ဂ်ဘက်ကို လိုက်လာကြပါပြီ။ မြန်မာယူနီကုဒ်ကလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အင်တာနက် ဖောင့်ဖက်ကို ၀င်ရောက်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်တာနက် သုံးသူတွေ အနေနဲ့ ဘလော့ဂ်ဆိုတာကို မဖတ်မဖြစ် ဖတ်လာကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက ၀က်ဘ်ဆိုက် အရေအတွက် ထင်ရသလောက် မများပြားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပို့စ်အရေအတွက် အနည်းငယ်ရှိတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေက များပြားပါတယ်။ ပထမဆုံး ဘလော့ဂ်ကို အသုံးများခဲ့တာက Blogger ပါ။ ဒါပေမယ့် ခုအချိန်မှာတော့ WordPress ကို အသုံးများလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူက Content Management System လေ။ Hosting မရှိလည်း ဘလော့ဂ်ပုံစံမျိုး ရေးလို့ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ပိုင် Hosting ရှိရင်တော့ CMS ကို Hosting ပေါ်တင်ပြီး လည်ပတ်လို့ရတယ်လေ။
ဒီနေရာမှာ WordPress က မြန်မာပြည်မှာ အသုံးများခဲ့တာလည်းဆိုတော့ Access denied ဆိုတဲ့ စာသားကြောင့် ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ရေးချင်တဲ့ သူတွေက သူ့ဘလော့ဂ်ကို ဖတ်စေချင်တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် Blogger တို့ wordpress တို့လို subdomain တွေက ဘန်းထားတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ဘလော့ဂ်ရေးချင်တဲ့ သူတွေ မသုံးချင်ကြပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ free hosting တွေ သုံးပြီး CMS ကနေ Run ကြပါတယ်။ CMS တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ WordPress က free themes တွေလည်း ပေါတယ်။ Plugins တွေလည်း ပေါပေါများများ ရှိတယ်။ CSS , HTML , PHP နားလည်ရင်တောင် ကိုယ်ပိုင် Theme ရေးရတာ အဆင်ပြေတယ်။ ဒါကြောင့် wordpress ကို သုံးနေကြတာပဲလေ။
Blogging is dead ဆိုတဲ့ Blogger ကတော့ လွမ်းစရာ မရှိလောက်ပါဘူးနော်။